Izindaba - Kuzokwenzekani uma iphuka i-cylinder head gasket
Injini eyisilinda yekhanda evuthayo ne-compression ukuvuza komoya ukwehluleka njalo. Ukusha kwe-Cylinder head gasket kuzokwehlisa kakhulu isimo sokusebenza kwenjini, noma kwehluleke nokusebenza, futhi kungadala ukulimala ezingxenyeni ezithile noma ezingxenyeni ezithile ezihlobene; ekucindezelweni nasekushayweni ngamandla kwenjini, ukubekwa uphawu kwesikhala esiphezulu se-piston kumele kungabi nakusebenza, Akukho ukuvuza komoya.
1. Ukwehluleka ukusebenza ngemuva kokuphuka kwe-gasket yekhanda lesilinda
Ngenxa yezindawo ezahlukahlukene zokushiswa kwe-gasket yekhanda lesilinda, izimpawu zokwehluleka nazo zehlukile:
ukuqhuma phakathi kwamasilinda amabili asondelene
Ngaphansi kwesisekelo sokungavuli ukwehla kwamandla, nginyakazise i-crankshaft futhi ngezwa ukuthi ingcindezi kuwo womabili amasilinda ibinganele. Lapho injini iqaliswa, kwavela intuthu emnyama, nejubane lenjini lehla kakhulu, likhombisa amandla angenele.
2. Ikhanda lesilinda liyavuza
Ugesi onomfutho ocindezelwe kakhulu ubalekela emgodini we-cylinder head bolt hole noma uvuza ebusweni obuhlangene bekhanda lesilinda nomzimba. Kukhona igwebu eliphuzi elikhanyayo lapho kuvuza khona umoya. Lapho ukuvuza komoya kubucayi, kuzokwenza umsindo wokuthi “useduze”, kwesinye isikhathi kuhambisane nokuvuza kwamanzi noma kukawoyela. Ungabona indiza yekhanda lesilinda elihambelanayo nendawo eseduze kwayo ngesikhathi sokuqaqa nokuhlola. Kukhona okusobala kwekhabhoni emgodini we-bolt yekhanda lesilinda.
3, ephaseji kawoyela wegesi
Ugesi onomfutho ophakeme ungena ephasejini lokuthambisa eliphakathi kwebhulokhi yenjini nekhanda lesilinda. Izinga lokushisa likawoyela epanini likawoyela lihlala liphakeme lapho injini isebenza, i-viscosity kawoyela iba mncane, ingcindezi iyancipha, nokuwohloka kuyashesha. Kukhona amabhamuza asobala emafutheni athunyelwe engxenyeni engenhla yekhanda lesilinda ukugcoba indlela yokusabalalisa umoya.
4, ingcindezi ephezulu ingena ejazini lamanzi elipholile
Lapho ithempelesha yamanzi epholisa injini ingaphansi kuka-50 ℃, vula ikhava yethangi lamanzi, uyabona ukuthi kunamabhamu asobala akhuphuka futhi avelayo ethangini lamanzi, futhi umoya omningi oshisayo ukhishwa emlonyeni wethangi lamanzi. Njengoba izinga lokushisa kwenjini likhuphuka kancane kancane, Ukushisa okuphuma emlonyeni wethangi lamanzi nakho kuye kwanda kancane kancane. Kulokhu, uma ipayipi lokuchichima kwethangi lamanzi livinjiwe futhi ithangi lamanzi ligcwaliswa ngamanzi esembozweni, isimo samabhamuza akhuphuka sizoba sobala ngokwengeziwe, futhi isimo sokubilisa sizovela ezimweni ezinzima.
5, isilinda senjini nejakhethi yamanzi yokupholisa noma indlela yokuthambisa kawoyela idlula
Kuzoba namabhamuza ka-oyela amnyama aphuzi entanta ngaphezulu kwamanzi apholisayo ethangini lamanzi noma kuzoba namanzi asobala emafutheni epanini likawoyela. Lapho lezi zenzakalo ezimbili zokushaywa zibucayi, amanzi noma uwoyela kuzoba seqenjini.